Ukuze indodakazi yakho wabheka zikanokusho zesimanje, kodwa ngesikhathi esifanayo hhayi eziyinselele kakhulu, udinga nje kuphela wezigqoko akhethiwe kakhulu ngokucophelela, kodwa futhi banake ukunemba ekhanda. Yiziphi, ekahle kwekhanda amantombazane ukuba izinwele naphakathi? Indlela ukukhetha stylish kunazo futhi ngesikhathi esifanayo akakubangeli inketho?
Ukuze udale zikanokusho zezinwele yesimanje amantombazane ukuba izinwele naphakathi, uzodinga izintwana ezimbalwa. Okokuqala, it is a ikamu. Ungakwazi Ngokuqinisekile ukusizakala ajwayelekile izinwele ibhulashi. Kodwa kule nqubo ye ebeka okusadingeka nekama ke. Kubalulekile ukuba isitokwe-umsila ikamu. Sekuyisikhathi eside iwine ukuqashelwa abalungisa izinwele, njengoba sekube ngasuthi esisemqoka ekwakhekeni zombili onobuhle elula neyinkimbinkimbi. Okwesibili, abalungisa izinwele eziningana omfisha, izikhonkwane, engabonakali, zokuhlobisa izinwele omfisha, bands zenjoloba, ngefaskamu, usilika noma satin kudabuke ukuhlobisa zezinwele for girls. 2013 wayefuyile kakhulu ezihlukahlukene namaqoqo kusuka wochwepheshe ehola. Bona ninikeza hhayi kuphela okukhethwa kukho amantombazane nabesifazane asebekhulile kuvuleke, kodwa futhi esizukulwaneni esisha, ukunikela kokubili abayitoho futhi kwekhanda zemikhosi.
Amathe noma imisila
Ukuze ukhethe ukufakwa ephelele Kunoma yikuphi ethize kuyodingeka ichithe isikhathi esithile. zezinwele Trendy amantombazane ukuba izinwele naphakathi kungaba elula kakhulu design, kodwa ngempumelelo kakhulu. Into eyinhloko ukuthi zivumelane ngokuphelele ladvwetjelwe isithunzi ingane, ngokuvumelanayo kuhlangene ukubukeka, kodwa futhi kuhambisana ndawo umcimbi. Indlela elula ukuhlobisa ikhanda kwengane kuyoba kwamagoda ezahlukene. Ngisho ngesikhathi obuphelele naphakathi sibukeka sisihle eluka French, wabeka noma aluka emhlabeni idayagonali. Uma nhlobo, ungakwazi tie ezimbalwa imisila ukudlala futhi cute bewahlobisa ne bands zokuhlobisa. Noma ukususa izinwele kusukela ebunzini lakhe, usebenzisa i-bezel stylish. Uma wayefisa, ungakwazi ngaso sonke isikhathi ukhetha zezinwele kokuphakathi izinwele amantombazane ukuze enze kubo ngempela ngokungafani abanye!
I zezinwele elula futhi ozithandayo kakhulu amantombazane ukuba izinwele naphakathi - curls nje okuxekethile. Uma ingane akanayo ezisontekile ke kulula kakhulu ukulungisa usebenzisa papilotok. Zihlanganisa izindandatho ukudlala, ungakwazi ukukhiya isitayela sabo bese ukukhulisa izinwele okhakhayini, wacosha ukuyona zokuhlobisa. Lolu khetho kungaba jikelele amantombazane, ngoba ingasetshenziswa njengendlela nsuku zonke futhi wenza isitayela kusihlwa. Uma kuyoba okufakile onesizotha engena ekukhanyeni (yaseshashalazini, izivakashi, umshado nokunye.), Kufanele nisebenze kanzima futhi wenze kwekhanda elihle futhi eyinkimbinkimbi. Ake sifaka amahhanisi imisila, izinwele noma ikhala. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuhlobisa ikhanda noma kuze kudabuke umhlane nokwelukiweyo enhle hairpins kwengane. Isikhathi kuyodingeka ichithe ama eziningi, kodwa umphumela kuwufanele umzamo!
Kanjani izinwele usebe nge band nokunwebeka: charm Greek